Averin’i Kehinde Wiley Sainina Ireo Sary Tranainy Satria ‘Raha Misy Dikany ny Ain’ny Mainty, Mendrika Ho Hita Amin’ny Sary Hosodoko izy Ireny’ · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 08 Novambra 2016 15:27 GMT
Asehon'ity sary ity ny antsipirihany avy amin'ilay “Maria mpiaro ny osa”, sary voaloko amin'ny fitaratra nataon'i Kehinde Wiley. Sary: natolotr'i Kehinde Wiley
Ity tantara avy amin'i William Troop ity dia tao amin'ny PRI.org no nivoaka voalohany tamin'ny 2 Novambra 2016. Naverina navoaka etoana ho ampahany amin'ny fifanarahana fifampizaràna votoaty.
Lazain'i Kehinde Wiley, ilay artista mpanao taokanto ho an'ny maso, monina ao New York, fa tsy tena mpiondana fivavahana loatra izy. Mety hihevitra izany ianao eo ampijerena ny sasany amin'ny asany.
Amin'izao fotoana izao i Wiley dia manatanteraka fampisehoana iray ao amin'ny Petit Palais ao Parisy, antsoina hoe “Toreo”. Asa goavana 10 no asongadina aminà fitaratra voaloko sy loko menaka atao ambony lamba. Maneho sary masina fahiny daholo ny tsirairay amin'ireny, amin'ny endrika fampiasan'ireo artista Eoropeana nandritry ny vanimpotoanan'ny Fahateraham-baovao. Iverenan'i Wiley sainina ny sehatra tsirairay, amin'ny fametrahana ny olona tsy fotsy hoditra ho eo amin'ny ivony amin'izao andro maoderina izao, manao pataloha fohy sy akanjo bà tsy misy tànany, sy ny sisa.
Ho an'ireo mpijery, sady mahasondriana no mahafinaritra ny vokatra azo. Aleo ianao no hijery azy,. Eto ambany, ery amin'ny havia, ny fitaratra voaloko avy amin'ny taonjato faha-16, antsoina hoe “Masimbavy Ursula sy ireo virjiny martiora,” nataonà mpanakanto tsy fantatra anarana. Ary eo amin'ny havanana ny fomba namerenan'i Wiley azy ao anatin'ny vaninandro maoderina.
Henoy eto ny fitantaràna azy ao amin'ny PRI.org »
“Firotsahana an-tsehatra” no amaritan'i Wiley ny zavatra nataony
Ny vita sary eto dia i “Masimbavy Ursula sy ireo virjiny martiora,” vita voalohany tamin'ny 1535, milahatra amin'ilay dika nataon'i Kehinde Wiley ho an'ny vaninandro maoderina tamin'ny 2014. Sary: (havia): © Victoria & Albert Museum, London; (havanana) Natolotr'i Kehinde Wiley
“Amin'ny ankapobeny,” hoy izy, “ny ankamaroan'ireo asa hitantsika any amin'ireo mozea goavana erantany dia rakotra olona izay toa tsy mitovy amiko mihitsy. Fony zaza, nitombo tamin'ny fianarana sy fiderana ireo asa hosodoko goavana vitan'ny Eoropeana Tandrefana aho., Nefa koa naniry ny hahatratra ny tanjona mba ho fantatra ao anatin'izany asa izany ny fisian'ny tena.”
Amin'ny teny hafa, nirian'i Wiley ny hahita ny tenany ho ao anatin'ireny sarinà mahefy fo goavana ireny. Ary amin'ny maha-mpanakanto azy, hitany ho fotoana fanararaotra ny maka ireny fanehoana niaina taonjatom-pahombiazana ireny , ka ampiasàna azy ireny hanaovana fanambaràna iray tena milaza betsaka momba ny misy ankehitriny.
“Ny tsara indrindra aminy, ny fomba ataon'ny taokanto, tondroiny ny hoe iza isika amin'ny maha-olombelona antsika sy ny hoe inona isika amin'ny maha-soatoavina maha-olombelona. Ary raha misy dikany ny ain'ny mainty, mendrika ho hita amin'ny sary hosodoko izy ireny”
Sarin'ny “Tànan'i Nicolaas Ruterius, evekan'i Arras” ity sary ity, aminà fitaratra nolokoin'i Kehinde Wiley tamin'ny 2014. Sary: natolotr'i Kehinde Wiley
Lazain'i Wiley fa lalina mihitsy ny fanehoankevitra nandritry ny fotoana nanokafana ny fampisehoany tao Parisy tamin'ny volana lasa.
“Tsy mbola nisy hatrizay mpiambina tranombakoka marobe nandeha nanatona ahy toy ny nataon'izy ireo tao Parisy, ka nitenenan'izy ireo hoe, ‘Andriamanitra ô, tsy mbola hitako hatrizay mihitsy ity vatana mainty hoditra mameno toerana iray natao ho an'ny daholobe ity,’” hoy i Wiley.
Nolazainy fa sakelika mifangaro ao anatin'ny fiarahamonina frantsay ireo mpiambina tonga nanatona azy : mainty, fotsy ary Afrikàna tavaratra. Ary ambarany ho noho ny herin'ireo sary goavana nataony tamin'ny fitaratra ny fanehoankevitr'izy ireo.
“Tsy resaka firenena, tsy resaka foko ny hazavana mamirapiratra mivoaka avy amin'ilay fitaratra voaloko. Fa resaka tanjaka ao anatin'ny tontolo, famirapiratàna ara-bakiteny” hoy izy. “Ary raha afaka miasa ho an'ny zavatra rehetra ny taokanto, dia resaka fanehoana amintsika ny toetry ny fahasoavana ho an'ireo olona izay zara raha afaka ny ho hita amin'izao fomba izao.”
Fa izany eo ihany, ny asa manontolon'i Wiley dia mandeha lavitra mihoatra noho ny resaka olomalazan'ny finoana. Tafiditra ao anatiny ireo andianà tetikasa antsoiny hoe “Ny Sehatra Erantany.” Firenena iray eto ambonin'ny tany no ifantohan'ny tetikasany tsirairay, miaraka foana amin'ny hoe olona mainty na zarazara no ivon'ny sary.
“Ireo Fahasoavana Telo” dia hosodoko tamin'ny loko menaka nataon'i Kehinde Wiley tambonin'ny lamba, tamin'ny 2012. Sary: Natolotr'i Kehinde Wiley
Ny fampisehoana ataony amin'izao fotoana izao ao amin'ny Petit Palais ao Parisy dia haharitra hatramin'ny Janoary 2017. Eken'i Wiley fa fotoana mamparefo io fanehoana ny asany ao Frantsa io. Fanohanana no hitan'ny hery farany havanana any an-toerana ao anatin'io, noho ny olana aterak'ireo mpitsoaponenana sy mpifindra monina marobe tonga ao amin'ny firenena.
“Heveriko fa zavatra mazava ny hitantsika eto Amerika,” hoy izy. “Hitantsika io ao anatin'ny Brexit. Hitantsika koa ao Frantsa. Ary ireny rehetra mainty sy zarazara nipetraka ireny [toy ilay vao noravàna vao haingana tao Calais] nantsoina hoe “Jungle” … mila tsarovana [ireny toerana ireny] ho toy ny toerana, izay indray andro tany, efa fialohana ho an'ireo Eoropeana Tatsinanana, Jiosy ary pelaka.”
Famehezan'i Wiley azy ve? “Toerana fialokalofana hatry ny ela i Eoropa. Koa nahoana no hitsahatra tsy ho izany izy ho an'ireo mainty sy zarazara?”